G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) Unicode ၁၆ ရာစုနှစ် ပြင်သစ်ဘုရင် လူဝီ ၁၃ လက်ထက်မှာ ဂျိမ်းစ် မက်ကောလင်း လို့ခေါ်တဲ့ စကော့တလန်လူမျိုး တစ်ဦးကို သံမီးဖုတ် မျက်နှာစွပ်ပေးပြီး အပြစ်ဒဏ် ပေးခဲ့တယ် ။ သူ့ရဲ့ အပြစ်ကတော့ လူဝီဘုရင်ကို လက်နက်တွေ တီထွင်ပေးပြီး တစ်ခြားရန်သူတွေကိုလည်း လက်နက် ရောင်းတဲ့ သစ္စာဖောက်မှုပေါ့ ။ လက်နက်တီထွင်သူဆိုတာ ဘက်တစ်ဘက်တည်းကိုပဲ တီထွင်ပေးရတယ် နှစ်ဘက်ခွ တီထွင်ပေးရင် သစ္စာဖောက်ပေါ့ ။ ဒီဘက်မျက်မှောက်ခေတ်ဘက်ရောက်လာတော့ ဂျိမ်းစ်မက်ကောလင်းရဲ့ မျိုးဆက်တွေဟာ ကာဇတ်စတန်နိုင်ငံမှာ မားစ် ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လက်နက်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ် ။ အဲဒိကုမ္ပဏီက NATO ရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ လက်နက်သစ်တစ်မျိုး စမ်းသပ်အောင်မြင်သွားတယ် ။ အဲဒိလက်နက်ကတော့ သတ္ထုတွေကို စားပစ်တဲ့ နာနိုမိုက်လို့ ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်ပဲပေါ့ ။ နာနိုမိုက် ဒုံးကျည်ကို ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ပစ်မှတ်ကို ထိမှန်ရင် နာနိုမိုက်တွေဟာ ...
Pearl Harbor (2001) Unicode ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်၊ နံနက်ခင်း ၇ နာရီ ၄၈ မိနစ် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဟာဝိုင်အီကျွန်း၊ ပုလဲဆိပ်ကမ်း အမေရိကန် ရေတပ် စစ်အခြေစိုက်စခန်း ဂျပန်က သံခင်းတမန်ခင်း နည်းလမ်းနဲ့ အမေရိကန်ကို စစ်ထဲဝင်မလာဖို့ အပျော့ဆွဲ ဆွဲပြီး အီနေချိန် ၊ နောက်ကွယ်က စစ်မဟာဗျူဟာကို အကြီးအကျယ် ပြင်ဆင်ပြီး ၊ အမေရိကန်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ရေတပ် အခြေဆိုက်ရာ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို အလစ်အငိုက် ထိုးစစ်ဆင်ပြီး အမေရိကန်ကို အကောင်းဆုံး စစ်ကြေညာချက် ထုတ်လိုက်နိုင်တယ်။ ပုလဲဆိပ်ကမ်းရဲ့ သမိုင်းကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင် ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ပါးပါး ထည့် ဝါသနာကို အခြေခံ လေယာဉ် အရူးနှစ်ကောင်ကို ဇာတ်ကောင်ပြုပြီး စွန့်စားမှု အမိမြေအတွက် အသက်စွန့် ကြိုးပမ်းမှု အမေရိကန်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ကို ပြသမှု စစ်ရဲ့ မဟာဗျူဟာ ...
IMDB: 6.2/10 298,456 votes
The Kitchen (2019) Unicode Hell’s Kitchen လို့ခေါ်တဲ့ နယ်မြေလေးမှာ လူမိုက်အဖွဲ့ ကျင်လည်ကျက်စားပါတယ်။ ဆက်ကြေးကောက်လိုက် လူသတ်လိုက် ဓားပြတိုက်လိုက် လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ပါ ဇာတ်လမ်းအဖွင့်မှာတော့ လူမိုက်အဖွဲ့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ရော့ဘ်၊ ကယ်ဗင်နဲ့ ဂျင်မီတို့ သုံးယောက်သားဟာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဓားပြဝင်တိုက်ရင်း အက်ဖ်ဘီအိုင်ရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ် တစ်ရက်နှစ်ရက်နေရင် လွတ်လာမယ်ထင်ပေမယ့် ဗဟိုကတိုက်ရိုက်ကိုင်တာမို့လို့ ထောင်သုံးနှစ်စီ အသီးသီးကျသွားတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့က လစ်တဲဂျက်ကီ ဆိုတဲ့တစ်ယောက်စီ ခေတ္တလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါတော့တယ် သူတို့မိန်းမတွေကို အချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ပေးထားမယ်ထင်ပေမယ့် မသထာရေစာ လောက်သာ ပေးကမ်းထားတဲ့အခါမှာတော့ မိန်းမသားတန်မဲ့ လူမိုက်အဖွဲ့ထောင်ဖို့ ဇာတ်လမ်းဖန်လာပါတော့တယ် ဆက်ကြေးပေးပေမယ့် ကာကွယ်ပေးခြင်းမခံရတဲ့ဆိုင်တွေ.. ဆက်ကြေးကောက်ထားပေမယ့် ဘာတစ်ခုမှပြန်မလုပ်ပေးတာတွေကို သူတို့ပြုပြင်မယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လူမိုက်ဖွဲ့ထောင်လိုက်တာ ယောကျာ်းတွေထက်ရော လက်ရှိ လူမိုက်အဖွဲ့ထက်ပါ လက်ဇောင်းတွေထက်ကုန်လို့ ရဲတွေရော နာမည်ကြီးလူမိုက်အဖွဲ့တွေကပါ သူတို့ကို ပြောင်းစောင့်ကြည့်ရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပါတော့တယ် စိတ်နဲ့မတည့်ရင်သတ်ထည့်လိုက်တဲ့အဆင့်ထိ ကြမ်းလာတဲ့အခါမှာတော့ ဂိုဏ်းထဲမှာအချင်းချင်း သွေးကွဲမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ် အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ သူတို့ယောကျာ်းတွေက စောပြီးလွတ်လာတဲ့အခါမှာတော့… သူတို့တွေဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ပါ့မလား အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ယောကျာ်းတွေလက်ကလွတ်နိုင်ပါ့မလား လူမိုက်ဂိုဏ်းကိုမိန်းမသား ၃ ယောက်တည်းနဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာပါ တချိန်းချိန်းချမနေပေမယ့် တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့တော့သတ်နေတဲ့ကားပါ ရန်သူကိုလည်းသတ်ပါတယ် အချင်းချင်းလည်းသတ်ပါတယ် ဘာမှသတ်စရာမရှိရင် အမျိုးအချင်းချင်းပြန်သတ်ပါတယ် Credit Review Zawgyi Hell’s Kitchen လို႔ေခၚတဲ့ နယ္ေျမေလးမွာ လူမိုက္အဖြဲ႕ က်င္လည္က်က္စားပါတယ္။ ဆက္ေၾကးေကာက္လိုက္ လူသတ္လိုက္ ဓားျပတိုက္လိုက္ လုပ္ေနတဲ့အဖြဲ႕ပါ ဇာတ္လမ္းအဖြင့္မွာေတာ့ လူမိုက္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေရာ့ဘ္၊ ကယ္ဗင္နဲ႔ ဂ်င္မီတို႔ သုံးေယာက္သားဟာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ဓားျပဝင္တိုက္ရင္း ...
The Divine Fury (2019) Unicode ပတ်ယွန်းဟို ဟာကလေးဘဝတုန်းကဘုရားသခင်ကိုရိုသေကိုင်းရှိုင်းကြည်ညိုသက်ဝင်သူတစ်ဦးပါ။တစ်နေ့သူ့အဖေဟာသံသယရှိတဲ့တရားခံနောက်လိုက်ရင်းမတော်တဆဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ချိန်မှစပြီးဘုရားသခင်အပေါ်စတင်မုန်းတီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အမုန်းတရားကလည်းသူ့နှလုံးသားထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာအမြစ်တွယ်နေခဲ့ပါပြီ။ တစ်ရက်သူရဲ့လက်ဖဝါးမှာခေတ်မီဆေးပညာနဲ့ရှင်းပြရခက်ခဲတဲ့သွေးထွက်သံယိုဒဏ်ရာကိုရုတ်တရက်ရရှိပြီးသူလက်မခံပဲမယုံကြည်ထားတဲ့သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေဆက်တိုက်ကြုံတွေ့လာရပြီးသူ့ဘဝထဲမှာအလှည့်အပြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ သူဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးပြီးဖြေရှင်းမှာလဲ။သူအဖြစ်မှန်ရှာဖွေတဲ့လမ်းတလျှောက်သူ့ကိုဒုက္ခလိုက်ပေးနေတဲ့သူတွေကရောဘယ်သူတွေလဲ။ ဘာကြောင့်သူ့ကိုမှရွေးချယ်ပြီးအခက်တွေ့အောင်လုပ်ရတာလဲ ဆိုတာတွေကိုဇာတ်လမ်းကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ Review by Khin Myowin Zawgyi ပတ္ယြန္းဟို ဟာကေလးဘဝတုန္းကဘုရားသခင္ကို႐ုိေသကိုင္း႐ႈိင္းၾကည္ညိဳသက္ဝင္သူတစ္ဦးပါ။တစ္ေန႔သူ႔အေဖဟာသံသယ႐ွိတဲ့တရားခံေနာက္လိုက္ရင္းမေတာ္တဆျဖစ္ၿပီးေသဆံုးခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီးဘုရားသခင္အေပၚစတင္မုန္းတီးတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါတယ္။ သူအရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာသူ႔အမုန္းတရားကလည္းသူ႔ႏွလံုးသားထဲမွာခိုင္ခိုင္မာမာအျမစ္တြယ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ တစ္ရက္သူရဲ႕လက္ဖဝါးမွာေခတ္မီေဆးပညာနဲ႔႐ွင္းျပရခက္ခဲတဲ့ေသြးထြက္သံယိုဒဏ္ရာကို႐ုတ္တရက္ရ႐ွိၿပီးသူလက္မခံပဲမယံုၾကည္ထားတဲ့သဘာဝလြန္ျဖစ္ရပ္ဆန္းေတြဆက္တိုက္ၾကံဳေတြ႔လာရၿပီးသူ႔ဘဝထဲမွာအလွည့္အေျပာင္းေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ သူဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြသံုးၿပီးေျဖ႐ွင္းမွာလဲ။သူအျဖစ္မွန္႐ွာေဖြတဲ့လမ္းတေလ်ွာက္သူ႔ကိုဒုကၡလိုက္ေပးေနတဲ့သူေတြကေရာဘယ္သူေတြလဲ။ ဘာေၾကာင့္သူ႔ကိုမွေရြးခ်ယ္ၿပီးအခက္ေတြ႔ေအာင္လုပ္ရတာလဲ ဆိုတာေတြကိုဇာတ္လမ္းကိုၿပီးဆံုးေအာင္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကပါလို႔ Review by Khin Myowin
Gemini Man (2019) Unicode ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ဝယ်လ်စမစ်ရဲ့ ရုံတင်ကား အသစ်ပါပဲ။ အက်ရှင်အသားပေးနဲ့ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် နည်းနည်းဆန် ပါတယ်။ ဟင်နရီဟာ စစ်ဘက်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့ အတော်ဆုံး လုပ်ကြံရေးသမားပါ။ သူအသက်ရလာလို့ အငြိမ်းစားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ သူထင်သလို တကယ်အနားမယူနိုင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး စစ်ဆင်ရေးက ထင်တာထက် ပိုရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့နောက်ကို လုပ်ကြံရေးသမားတွေ ပြန်လိုက်လာပြီး လိုက်သတ်ဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်။ ဒီတော့ သူ ဒါတွေကိုအလွတ်ရုံးရင်းနဲ့ အကြောင်းရင်းကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Htet Thura Aye ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဒီ႐ုပ္ရွင္ကေတာ့ ဝယ္လ္စမစ္ရဲ႕ ႐ုံတင္ကား အသစ္ပါပဲ။ အက္ရွင္အသားေပးနဲ႔ သိပၸံစိတ္ကူးယဥ္ နည္းနည္းဆန္ ပါတယ္။ ဟင္နရီဟာ စစ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ အေတာ္ဆုံး လုပ္ႀကံေရးသမားပါ။ သူအသက္ရလာလို႔ အၿငိမ္းစားယူဖို႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့အခါ သူထင္သလို တကယ္အနားမယူႏိုင္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး စစ္ဆင္ေရးက ထင္တာထက္ ပိုရႈပ္ေထြးေနခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေနာက္ကို လုပ္ႀကံေရးသမားေတြ ျပန္လိုက္လာၿပီး လိုက္သတ္ဖို႔ႀကိဳးစားလာၾကတယ္။ ဒီေတာ့ သူ ဒါေတြကိုအလြတ္႐ုံးရင္းနဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားရပါေတာ့တယ္။ Credit Review ဒီဇာတ္ကားကိုဘာသာျပန္ေပးသူကေတာ့ Htet Thura Aye ျဖစ္ပါတယ္
Attack on Titan II: End of the World (2015) Unicode ဒီဇာတ်ကား ကတော့ ဂျပန် Anime နဲ့ manga လောက မှာ နာမည်ကြီး ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Attack on Titans ကို လူသရုပ်ဆောင် တွေနဲ့ ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာဖျက် လူသားစား titanကောင်ကြီးတွေ ဟာ လူသားမျိုးနွယ် တွေကို မျိုးသုဉ်းလောက်သည်ထိ ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်း ရှိပြီး လူသားတွေ ရဲ့ နောက်ဆုံး မျှော်လင့်ချက်က အဲရန် ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးနဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပေါ်ကို စုပြုံကျလာပါတယ်။ Titanတွေရဲ့ ရန်ကိုကြောက်လို့ နံရံအမြင့်ကြီးတွေ နောက်မှာနေ နေရတဲ့ လူသားတွေ ထဲမှာ အဲရန်ဆိုတဲ့ လူငယ်ကတော့ အကြောက်အလန့် မရှိတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်။ သူ့သူငယ်ချင်း အာမင် ကတော့ လူကြောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အဲရန် ပြောသမျှ ယုံကြည်လက်ခံ တတ်တဲ့ ကောင်မလေး ...
IMDB: 4.8/10 3,971 votes
Attack on Titan (2015) Unicode လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၁၀၀ ကျော်ကပေါ်လာတဲ့ လူသားစားတဲ့တိုက်တန်တွေ..တိုက်တန် တွေကိုကြောက်လို့ နံရံမြင့်ကြီးတွေ ထဲမှာနေနေရတဲ့လူသားတွေ..တိုက်တန်တွေကို အယုံအကြည် မရှိခဲ့တဲ့အဲရန် နဲ့သူငယ်ချင်း လူကြောက်လေးအာမင်..ပြီးတော့ အဲရန်ပြောသမျှယုံကြည်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးမီကာဆာတို့ ..နံရံ ကြီးတွေရဲ့အပြင် ဘက်ကိုထွက်ဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့တစ်နေ့မှာ....တိုက်တန်တွေ ပေါ်လာပြီးလူသားတွေ တိုက်ခိုက်ခံကြရပြီးတဲ့ နောက်မှာအဲရန် အာမင်နဲ့ မီကာဆာတို့ ဘာတွေပြောင်းလဲ သွားကြမလဲဆိုတာရယ်...တိုက်တန်တွေ ကိုတိုက်ခိုက်ကြတာတွေ သေကွင်းသေကွက်တွေက တကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် (18+ Rated ကားဖြစ်ပါတယ် သေတာတွေ ကြမ်းလို့နော်colonthree emoticon )ဒီကားဟာ ဂျပန်Animation ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂျပန်မှာလဲအရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်( ဒီကားကို ရုံတင်တုန်းကလက်မှတ်မရလို့ ရုံးလစ်ပြီးကိုသွားကြည့်ပါတယ် tongue emoticon )Anime ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ ဒီကားဟာAnime ကို မမှီဘူးလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ် Anime ဗားရှင်းထဲက မီကာဆာရဲ့ကာရိုက်တာဟာ Live-Action Movie ထဲက ကာရိုက်တာနဲ့ လုံးဝကိုကွဲပြားနေတဲ့ အချက်လဲပါပါ လိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Animated ...
IMDB: 5.1/10 11,261 votes
Olympus Has Fallen (2013) Unicode အိုလံံပက်စ် ကရော ဒီကားမှာ ဘယ်လိုကျရှုံးဦးမလဲ။ အိုလံပက်စ် ဆိုလို့ တခြားပြေးမမြင်လိုက်ပါနဲ့ အိမ်ဖြူတော်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ကုတ်နာမည်ပါ။ အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ သမ္မတအိမ်တော်ကို တိုက်ခိုက် လာခဲ့ပါတယ်။ မိုက်ခ် ဘန်းနင်း ဟာ နာမည်ပျက်နေတဲ့ အိမ်ဖြူုတော် လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အိမ်ဖြူတော်ထဲမှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေကြား သမ္မတနဲ့ အတူပိတ်မိနေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တိုက်ရည်ခိုက်ရည် ညဏ်ရည်နဲ့ အိမ်ဖြူတော်နဲ့ အတူ သမ္မတကို ကယ်တင်ပြီး အန္တရယ်ကြားက လွတ်အောင် ဘယ်လိုကြံစည်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီ OLYmpus has Fallen ဆိုတဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်းလေးကို ဒေါင်းပြီး ကြည့်ရှု့လိုက်ပါ။ သမ္မတကတော့ Batman fan တွေရဲ့ အသဲကျော် ဟာဗေး ခေါ် Two faces ကြီးဖြစ်ပြီး Morganfree man ကြီးလည်းပါဝင်ထားပါတယ်။ ကဲ အကျော်ကြားဆုံး အမေရိကန် အိမ်ဖြုတော်ကြီး ဘယ်လိုကျ ...
Ong-bak3(2010) Unicode ကဲအပိုင်း၃လေးကိုတော့ နည်းနည်းလေးကြာမှတင် ပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော် ong bak 3မှာတော့ ဇတ်လမ်းအစမှာ ong bak 2နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်၃ကိုမကြည့်ခင်၂ ကို အရင်ကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင် ပါတယ်ဇတ်လမ်းအစမှာတော့ တိုနီဂျာဟာ အယုဒ္ဓယမြို့စားရဲ့ အဖမ်းအဆီးကိုခံနေရပါတယ် အနှိပ် အစက်ကိုလည်းခံနေရပါတယ် ဒါပေမယ့်အယုဒ္ဓယ ဘုရင်ကတိုနီဂျာကိုမသတ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါ တယ် ဒဏ်ရာတွေနဲ့ တိုနီဂျာတစ်ယောက် တောရွာ လေးတစ်ရွာကိုရောက်ရှိပြီး ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦး ရဲ့ဆေးကုသမှုကိုနှစ်ရှည်လများခံခဲ့ရပါတယ် မြို့စားရဲ့နိပ်စက်မှု ဒဏ်တွေကြောင့်ဒဏ်ရာများပျောက်ကင်းဖို့နှစ်ရှည်လများကြာရှည်ခဲ့ရပါတယ် နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘုရားရိပ်တရားရိပ်ရဲ့အကျိူးကျေးဇူးတွေကြောင့်ဒဏ်ရာအားလုံးသက်သာပျောက်ကင်းခဲ့ရပါတယ် မိမိရဲ့မိဘ၂ပါးကိုသတ်ပစ် ခဲ့သည့်မြို့စားနဲ့ ကျီးကန်းမိစ္ဆာတို့ကို ပြန်လည်ပြီးလက်စားချေဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ် အက်ရှင်ခန်း တခမ်းတနားနဲ့ပရိတ်သတ်တွေအကြိူက်တွေ့အုံးမှာပါ Credit Review Zawgyi ကဲအပိုင္း၃ေလးကိုေတာ့ နည္းနည္းေလးၾကာမွတင္ ေပးရတဲ့အတြက္အားလုံးကိုေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္ ong bak 3မွာေတာ့ ဇတ္လမ္းအစမွာ ong bak 2နဲ႔ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္ဒါေၾကာင့္၃ကိုမၾကည့္ခင္၂ ကို အရင္ၾကည့္ၾကပါလို့တိုက္တြန္းခ်င္ ပါတယ္ဇတ္လမ္းအစမွာေတာ့ တိုနီဂ်ာဟာ အယုဒၶယၿမိဳ့စားရဲ့ အဖမ္းအဆီးကိုခံေနရပါတယ္ အႏွိပ္ အစက္ကိုလည္းခံေနရပါတယ္ ဒါေပမယ့္အယုဒၶယ ဘုရင္ကတိုနီဂ်ာကိုမသတ္ဖို့ အမိန႔္ထုတ္လိုက္ပါ တယ္ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ တိုနီဂ်ာတစ္ေယာက္ ေတာရြာ ေလးတစ္ရြာကိုေရာက္ရွိၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ဦး ရဲ့ေဆးကုသမွုကိုႏွစ္ရွည္လမ်ားခံခဲ့ရပါတယ္ ၿမိဳ့စားရဲ့နိပ္စက္မွု ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ဒဏ္ရာမ်ားေပ်ာက္ကင္းဖို့ႏွစ္ရွည္လမ်ားၾကာရွည္ခဲ့ရပါတယ္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ဘုရားရိပ္တရားရိပ္ရဲ့အက်ိဴးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ဒဏ္ရာအားလုံးသက္သာေပ်ာက္ကင္းခဲ့ရပါတယ္ မိမိရဲ့မိဘ၂ပါးကိုသတ္ပစ္ ခဲ့သည့္ၿမိဳ့စားနဲ႔ က်ီးကန္းမိစၧာတို့ကို ျပန္လည္ၿပီးလက္စားေခ်ဖို့ႀကိဳးစားပါေတာ့တယ္ အက္ရွင္ခန္း တခမ္းတနားနဲ႔ပရိတ္သတ္ေတြအႀကိဴက္ေတြ႕အုံးမွာပါ Credit Review
IMDB: 5.0/10 12,373 votes
Ong Bak2(2008) Unicode Ong Bak နဲ့ Ong Bak2ဟာဇာတ်လမ်းကော ဇာတ်ကွက် ကော လုံးဝလုံးဝမတူပါဘူး သပ်သပ်စီပါ ဒါပေမယ့်တိုနီဂျာရဲ့အက်ရှင်တွေကတော့ လုံးဝခွဲထွက်မသွားပဲ ပို တောင်မိုက်လာပါသေးတယ် ဇာတ်လမ်းကတော့ ရှေး ဟောင်းအယုဒ္ဓနိုင်ငံတော်ကနေ စတင်ထားပါတယ် မိမိရဲ့ခမည်းတော်နဲ့မယ်တော်တို့ အသတ်ခံရပြီးနောက် မိမိအသက်ကိုပါ ထိုသူတို့ကရန်ရှာ လာသောအခါ အိမ် ရှေ့မင်းသားလေးဟာသူ့ရဲ့ သက်တော်စောင့်အကူအညီနဲ့ ရန်သူတွေလက်မှ လွှတ်အောင်ထွက်ပြေး ရပါတော့ တယ်မထင်မှတ်ပဲ ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်း လူမျိူးနွယ်တစ်စုက ထိုလူငယ်လေးကို ကယ်တင်သွားပြီးနောက် ထိုကောင် လေးဟာ အလွန်ပင်တော်လှတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမား ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတော့တယ် ငယ်စဉ်က မိဘများကို သတ်ပစ်သွားတဲ့သူကို ထိုကောင်လေးဟာ မိုးအဆုံးမြေအနှံ့လိုက်ရှာပါတော့တယ် မိမိဘဝကို ခါး သက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သူများကို လိုက်လံလက်စားချေ ဖို့ပေါ့ ဒါပေမယ့်ငယ်စဉ်ကတည်းက ချစ်ခဲ့ရသူကိုရန်သူ ရဲ့လက်ထဲမှာမတော်တဆတွေ့ မြင်ခဲ့ရတဲ့အခါ ထို ကောင်လေး ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ကောင်လေးရဲ့မိဘ တွေကို ဘယ်သူသတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာ အက်ရှင်ခန်း အလန်းစားတွေနဲ့တိုနီဂျာကတင်ဆက်ထားပါတယ် Ong Bak 1 ကြိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက် Ong Bak2ကလည်းဆွဲဆောင်မှု တစ်မျိူးပေးစွမ်းအုံးမှာပါ Credit Review Zawgyi Ong Bak နဲ႔ Ong Bak2ဟာဇာတ္လမ္းေကာ ...
IMDB: 6.2/10 27,934 votes
Ong-Bak: The Thai Warrior (2003) Unicode ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကချခန်းဖွင့်တိုင်းကစားရင် ဒူး တံတောင်မင်းသားရယ်လို့အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကား မြန်မာပြည်မှာဘုရားခေါင်းပြတ်ကားရယ်လို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ကြီးTonyJaaရဲ့ပွဲဦးထွက်ဘတ်ဂျက်၁သန်းကုန်ကျခံပြီးသန်း၂၀ကျော်ပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ Credit Review Zawgyi ဒီတခါေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္ကခ်ခန္းဖြင့္တိုင္းကစားရင္ ဒူး တံေတာင္မင္းသားရယ္လို႔အမွတ္တရျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ကား ျမန္မာျပည္မွာဘုရားေခါင္းျပတ္ကားရယ္လို႔နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ႀကီးTonyJaaရဲ႕ပြဲဦးထြက္ဘတ္ဂ်က္၁သန္းကုန္က်ခံၿပီးသန္း၂၀ေက်ာ္ျပန္ရခဲ့ပါတယ္။ Credit Review
IMDB: 7.2/10 68,286 votes